Forum serasera malagasy ay ay - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : ay ay
penina - 11/03/2008 03:16
Fa angah moa ny ay ay tsy hoe amin'ny alina ihany no mivoaka fa tsy mahatanty hazavana ny masony? Toa ny hazavan'ny kintana ihany dia ampy azy ijerevany. Dia ny toeran'ny kintana no amantarany ny toeran'ny tranony.
Tsy tadidiko hoe taiza aho no naheno an'izany. Tamin'ny tele angamba. Fa gaga fotsiny aho amin'ito sary ito.
penina - 11/03/2008 03:29
Kay tsy aye aye ilay izy fa "lehilahytsara" izany. Gasy sy alemana no nahita azy voaloha. Dia nanome azy anarana alemana miampy io lehilahytsara io. :twisted: Izaho anefa mino fa efa nisy nahita ireny taloha be sady efa nisy nanome anarana fa tsy nisy nampiasa dia tsy hay.
Ito ny aye aye.
penina - 11/03/2008 03:35
Mampahatsiaro ahy an'ito. http://www.youtube.com/watch?v=1qvOYgB6Tms :-D
kiadi - 11/03/2008 07:56
de iza elah amireo?:-D:-D:-D
yonikafopl - 11/03/2008 09:04
penina - 12/03/2008 08:45
Tsy aleoko ilay oindaozy :°)
kelly13 - 12/03/2008 15:22
mafatifaty reto izy
kiadi - 12/03/2008 15:49
misy hitovizana aminjy ry kelly ilay ray ! surtout ny maso =))=))=))=))=))=))=))=))=))
kelly13 - 12/03/2008 15:52
ka zay no ilazàko oe mafatifaty reto izy, tsy t hidoka tena za :-D:-D:-D
penina - 12/03/2008 16:00
Izay ilay teneniko hoe ny malagasy manan-karena fa tsy hainy fotsiny ny mifaly aminy.
Dia lasa dorany fotsiny.
xxx - 12/03/2008 16:30
soanja - 19/03/2008 06:18
Fahanano anarana nomen'ny Malagasy ny Aye aye hatramin'izay ary manana ny tantarany tokoa izy eo amin'ny fiainan'ny Malagasy izay niara-nonina tamin'izy ireo.
Indray andro hono rankizy dia nisy mpirahalahy nianala hiremby sy hihaza..... tohizako ny tohiny amin'ny manaraka.
penina - 20/03/2008 15:31
... dia izay hono no anaterana ny fatin'ny fahana eny amin'ny ranomasina.
sa tsy io ilay angano? :°)
soanja - 27/03/2008 03:22
Izy roalahy zany hoe hihaza gidro saingy tojo an'ilay ratsy tarehy nony alina. De samy mandinika hoe gidro ve ity sa biby hafa?
Tsy nihambahamba ny iray lahy fa tonga dia nitsoka ny fitsipika hamely ilay biby. Notatazan'ilay biby tamin'ny tanany anefa ny fitsipika sady natsipiny teny amin'ny tany. Toran'ny homehy kosa ilay lehilahy iray fa dia haratsina biby tsy misy toy izany!
Nanohy nitifitra ihany ilay iraika lahy sady toran'ny homehy hoe aleo vonoina fa biby ratsy tokoa sady miseho milay. Saingy notsenain'ilay biby indray indray ilay fitsipika nitsitika sady nazerany teny amin'ny tany.
Gaga talanjona izy roalahy fa ahoana? Nahoana ity biby raika ity toa malady sy kinga no mivontirika mila hiresaka.
Nitohy ihany anefa ny hehin'ilay lahy iray. Tapaka ny tsianainy e. Sady biby mpamosavy ity hoy izy no fanahy ratsy satria ratsy maso loatra moa ny tanany misy hoho tena mampitahotra tokoa.
Nokendren'ilay iray ny fen'ilay biby dia voa izy tamin'iny. Nezahiny nesorina ny fitsipika fa tsy afaka, farany izy nianjera avy eny ambony azo ary notatazan'izy roalahy moramora.
Teny an-dalana dia toran'ny homehy izy roalahy fa mahafaly azy ireo nahita ny fitsipaky ilay biby miala aina. Tonga tany an-tanana nony maraina dia notantarain'izy ireo ny zava-nisy tany anaty ala sy ny fomba nazahoana an'ilay biby. Izay nanopy maso sy nijery an'ilay biby dia toran'ny homehy avokoa tapa-tsinay.
Nony nozaraina ny hena dia samy nody ary faly fa samy nahazo anjara kely avy.
Ny ampitso anefa dia maty avokoa izay nihinana an'ilay biby. Izay no tantaran'i biby Fahana.
Nanomboka teo dia nofadian'ny tanala sy ny Betsimisaraka ny mihinana Fahana satria misy fanahy ao anatiny ary afaka mampijaly ny olombelona tokoa raha sanatria ka tsinotsinoavina ny momba azy.
Solitikabe - 02/04/2008 04:07
Ary ahoana indray ry Soanja no nahatonga ny Sud-Est hifady alika? Mba tiako fantarina mantsy eh. Mahafinaritra le tantara fa tohizo amin'ito indray.
soanja - 03/04/2008 14:44
Ny alika dia faran'izay maloto na manary hasina ho an'izay olona mikasika azy ho an'ny foko any atsimo antsinanana.
Taloha elabe hono dia nolazaina fa masim-bava sy to-teny tokoa ny olona avy amin'ny foko Antaimoro noho izy ireo manana ra arabo. Na izany anefa na tsy izany dia nanana fahavalo betsaka tokoa io foko io teo amin'ny manodidina azy. Indray mandeha izay hono dia vaky ny ady tamin'ny foko Antaimoro sy ilay foko fahavalony. Na dia efa nofefena sy nasiana tamboho ny tanana mba hiarovana amin'ny fahavalo dia tafiditra ihany ny fahavalo ary namano sy nandromba ny tao an-tanana. Ny alika hono no nahatonga azy ireo ho tratra tamin'izany satria nampiasain'ny alika ny fidirana miafina ny tanana ka hitan''ireto fahavalo. Nanomboka izay dia mihevitra ny alika ho biby mpamadika ry zareo ka nametraka an'io biby io ho isan'ny biby fady.
Inona kosa no atao hoe SANDRANA?
Ny atao hoe Sandrana dia izay biby rehetra heverina fa fady ny mihinana azy na manimbazimba tokoa ny hasina ananan'ireo izay lazaina fa mihinana azy.
Ny alika dia sandrana amin'ny foko any atsimo atsinananana. Ka raha misy vahiny mandalo ao an-tanana tamin'izany fotoana izany ka nihinana henan'alika dia roahina hiala ny tanana ilay vahiny ary dorona tanteraka ilay trano nandalovany na nipetrahany. Raha misy olona na havana na taranaka ahiahiana fa nihinana alika ny iray tamin'izy ireo dia avala an-drano ny fatiny fa tsy miditra fasan-drazana. Raha velona kosa izy fa tsy maty dia tsy tafiditra intsony ho isan'ny mpiaramonina fa atao iza hahalao monina azy.
Raha sanatria ka misy olona avy amin'ny foko hafa manompa ka milaza fa nihinana alika ny razan'ireto foko voalaza ireto dia fanimbazimbana faran'izay ratsy tokoa izany amin'izy ireo ka tsy afaka sy tsy milamina izany raha tsy misy joro atao ka amin'ny alalan'ny famonoana omby no hanaovana izany ho mariky ny fifonana.
Amin'ny manaraka indray entiko eto ny fady momban'ny vorona isan-karazany.